2 ပတ်သားကလေး - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » Latest Health Informations » ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း » ကလေးငယ်ပထမနှစ် »2ပတ်သားကလေး
ဖြတ်သန်းလာတာတစ်ပတ်ပဲရှိသေးပေမယ့် သင့်ကလေးလေးဟာ သင့်အပေါ်ကိုမှီခိုရမယ်ဆိုတာ သိလာပါပြီ။ ခုဆိုရင် သင့်အသံကိုတောင်သိနေကြပြီ။ သင့်အသံကိုကြားရရင် သူတို့ကိုစိတ်သက်သာရာရစေပြီး ၀မ်းဗိုက်အပြင်ဘက်က ဒီသူစိမ်းဆန်သေးတဲ့ ကမ္ဘာသစ်ကြီးမှာ လိုက်လျောညီတွေနေနိုင်ဖို့ စွမ်းအားတွေရလာပါတယ်။ ပြီးတော့ သူတို့တစ်ယောက်ထဲမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်း သိစေပါတယ်။ သင့်ကလေးလေးဟာ သင့်စကားတွေကို နားမလည်သေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သင့်နွေးထွေးမှုနဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေဟာ သူတို့လိုအပ်တာအကုန်ပါပဲ။
ခုဒုတိယရက်သတ္တပတ်မှာဆိုရင် ကလေးလေးဟာ ခေါင်းကိုအသာလေး ‘မ’နိုင်လာပါပြီ။ သူတို့မျက်နှာတွေမှောက်ပြီး လှဲနေတဲ့အခါ အသက်ရှူလမ်းကြောင်း လုံးဝပိတ်မသွားအောင် သတိထားဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်။ ကလေးလေးရဲ့ မျက်လုံးတွေဟာ ခုထိေ၀၀ါးနေသေးနိုင်သော်လည်း သူတို့မျက်လုံးကနေ ၂၀စင်တီမီတာ မှ ၄၀ စင်တီမီတာလောက်ထိ မြင်ရနေပါပြီ။
ခုချိန်မှာဆိုရင် သူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကို သတိထားမိလာပါပြီ။ သင့်ကလေးလေးကို အနီးကပ်ကနေ ကြည့်ကြည့်ပေးခြင်းဖြင့် သင့်ပုံပန်းသဏ္ဍာန်ကို သူတို့စူးစမ်းမှတ်သားလာနိုင်အောင် ကူညီပေးသင့်ပါတယ်။ ဒါဟာ နေ့စဉ်သူတို့ကိုစောင့်ရှောက်နေရင်းနဲ့ ဖြစ်သွားမှာပါပဲ။ နို့တိုက်နေရင်းနဲ့လည်း သင့်ခေါင်းကို ဟိုဘက်ဒီဘက် လှုပ်ယမ်းပေးခြင်းဖြင့် ကလေးလေးက သင့်ကိုကြည့်နေလား စမ်းသမ်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလေ့ကျင့်မှုဟာ ကလေးရဲ့မျက်လုံးကြွက်သားတွေ အားကောင်းလာဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။ တကယ်လို့ ကလေးက သင့်ကို တစ်ချက်ဖျတ်ကနဲလောက်ပဲကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်း စိတ်မပူပါနဲ့။ ကလေးလေးတွေဟာ ပထမလတွေမှာ ဝေေ၀၀ါးဝါးအကြည့်လေးတွေပဲကြည့်တတ်သေးတာပါ။
စကားတွေပြောနေပါ။ ကလေးလေးနဲ့ အမြဲဆက်သွယ်ပြောဆိုနေခြင်းဟာ သူတို့ကို သင့်အသံနဲ့ သင့်တည်ရှိမှုကို ကျင့်သားရလာစေပါတယ်။ သင့်စကားတွေတစ်လုံးမှနားမလည်နိုင်ပေမယ့် စကားလုံးတိုင်းမှာပါတဲ့ သင့်အချစ်တွေနဲ့ ၊ သင့်ရဲ့စောင့်ရှောက်မှုတွေကို သူတို့ခံစားနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ သင့်ကလေးကို လုံခြုံတယ်လို့ခံစားရစေပြီး စိတ်တည်ငြိမ်စေပါတယ်။
သင့်ရင်သွေးလေးကကျန်းမာနေတယ်၊ ဆရာဝန်ဆီသွားစရာမလိုဘူးလို့ သင်ထင်နေနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကလေးလေးနှစ်ပတ်သားအရွယ်မှာဆိုရင် သင်ဟာ ဒါတွေစစ်ဆေးပေးရပါမယ်။
နှာခေါင်းထဲမှအရည်များစုပ်ထုတ်ပေးခြင်းဖြင့် သူတို့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကို ရှင်းပေးခြင်း၊ ဒါဟာ နို့ပြန်အန်ခြင်း၊ သီးခြင်းတို့ကိုလျှော့ချပေးပါလိမ့်ပါမယ်။
ကလေးမျက်လုံးထဲကိုဘက်တီးရီးယားနဲ့ ကပ်ပါးကောင်များ ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းများ ကိုကာကွယ်နိုင်ရန် ဆေးခတ်ခြင်း
အရပ်၊ ခေါင်းလုံးပတ်တိုင်းခြင်းဖြင့် ကလေးရဲ့ကြီးထွားခြင်းကို စောင့်ကြည့်ခြင်း
မွေးကင်းစအသားဝါခြင်းဟာ ဖြစ်လေ့ရှိတတ်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုပါ။ အထူးသဖြင့် နေ့မစေ့လမစေ့မွေးတဲ့ကလေးတွေနဲ့ တချို့သော မိခင်နို့တိုက်ကျွေးတဲ့ကလေးတွေမှာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
မွေးကင်းစအသားဝါခြင်းဆိုတာ မွေးကင်းစကလေးရဲ့ အရေပြားနဲ့ မျက်လုံးတွေဝါခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ သွေးလမ်းကြောင်းထဲမှ ဘီလီရူဘင်ခေါ် အ၀ါဓာတ် ပစ္စည်းတစ်မျိုးကို စွန့်ပစ်ပေးဖို့ သူတို့ရဲ့အသည်းတွေက လုံလောက်အောင် မဖွံ့ထွားသေးလို့ဖြစ်ပါတယ်။
မွေးကင်းစအသားဝါခြင်းဟာ ပထမ သူတို့မျက်နှာမှစတင်ပါတယ်။ နောက်ရင်ဘတ်နဲ့ ၀မ်းဗိုက်ဆီရောက်လာပြီး နောက်ဆုံးမှာတော့ ခြေထောက်ထိပျံ့သွားပါတယ်။ ကလေးကအသားညိုလို့ သေချာမသိနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ သူတို့မျက်လုံးထဲမှ မျက်ဖြူသားနဲ့ သွားဖုံးတို့ကိုကြည့်ပြီးသိနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့မသေချာပါက ကလေးရဲ့နှာခေါင်း ဒါမှမဟုတ် နဖူးပေါ်ကိုအသာအယာဖိကြည့်လိုက်ပါ၊ အသားဝါရှိပါက သင်ဖိလိုက်တဲ့အခါ ၀ါသွားပါလိမ့်မယ်။
ကလေးရဲ့အပြင်ပန်းအသွင်အပြင်နဲ့ အသားဝါရှိမရှိ စစ်ဆေးမှာဖြစ်သော်လည်း ကလေးခြေထောက်ကနေသွေးယူကာ သွေးထဲမှ ဘီလီရူဘင်ပမာဏကိုလည်း တိုင်းတာပါလိမ့်မယ်။
ပုံမှန်မွေးကင်းစအသားဝါခြင်းဟာ များသောအားဖြင့် ကုသမှုအထူးတလည်မလိုဘဲ ၁ပတ် ၂ပတ် အကြာမှာ ကောင်းသွားပါတယ်။ မိခင်နို့များများတိုက်ပြီး ဘီလီရူဘင်တွေကို ၀မ်းထဲပါသွားအောင်လုပ်ပေးတာမျိုးလည်းကောင်းပါတယ်။ အသားဝါတာဆိုးတယ်ဆိုရင်တော့ အလင်းပြကုသခြင်း- ဘီလီရူဘင်တွေလျော့သွားအောင်မီးချောင်းအောက်ထား မီးပြခြင်းကိုအသုံးပြုပါလိမ့်မယ်။
သင့်ကလေးလေးမှာ အသားဝါရှိနေရင် စိတ်မပူပါနဲ့။ ဆရာဝန်ပြောသည့်အတိုင်း သေချာလိုက်နာဆောင်ရွက်ပါက ထိထိရောက်ရောက် ကုသပျောက်ကင်းနိုင်ပါတယ်။
ပထမရက်သတ္တပတ်တွေမှာ မိခင်တော်တော်များများဟာ ကလေးရဲ့ကိုယ်အလေးချိန်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး စိတ်ပူတတ်ကြပါတယ်။ ကိုယ့်ကလေးလေးများ အာဟာရချို့တဲ့နေပြီလား၊ ရှိသင့်တဲ့ကိုယ်အလေးချိန်ရှိရဲ့လား၊ တခြားကလေးတွေနဲ့စာရင် ဘာလို့ပေါ့နေတာပါလိမ့် စသည်ဖြင့်တွေးပူတတ်ကြတယ်။ မပူပါနဲ့၊ သင့်နို့တိုက်ကျွေးမှုက သင့်ကလေးလေးကို လုံလောက်အောင်ပေးနိုင်သလားဆိုတာ သိနိုင်တဲ့အချက်တွေကတော့- နို့တိုက်ပြီးတဲ့အခါ သင့်ရင်သားဟာ ပေါ့ပါးနေသလို လိုခံစားရပါလိမ့်မယ်၊ ရင်သွေးလေးရဲ့အသားအရေဟာလည်း ၀င်းဝါပြီးတင်းတင်းလေးရှိနေပါမယ်၊ သင်လက်လေးနဲ့ဖိကြည့်တဲ့အခါမှာလည်း ပြန်တွန်းကန်နိုင်တဲ့သတ္တိရှိနေပါမယ်။ တကယ်လို့ ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးပြီဆိုရင် သင်ဖိလိုက်တဲ့အခါ အသားပြန်ပြည့်မလာဘဲ တွန့်သွားပါလိမ့်မယ်။
နောက်တစ်နည်းကတော့ မိခင်နို့တိုက်နေစဉ် သူတို့မျိုချနေတာလေးကို နားထောင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်၊ နို့ရည်ချိုချိုကို ဘယ်လိုခုံမင်စွာ သောက်သုံးနေလဲဆိုတာကိုပေါ့။ ဒါ့အပြင် ကလေးလေးက အ၀ါရောင် ဒါမှမဟုတ် အမည်းရောင် ၀မ်းတွေပုံမှန်သွားနေတယ်ဆိုရင် ကောင်းတဲ့လက္ခဏာပါ။ သင်တော့ တစ်ရက်ကို ၅ခါမှ ၈ခါလောက် သေးခံလဲပေးရမှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုဆိုရင်ကလေးဟာ လုံလောက်တဲ့အင်အားတွေ၊ အာဟာရတွေရနေတယ်ဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်။
သင်ကမိခင်နို့ပဲတိုက်တိုက်၊ နို့ဘူးပဲတိုက်တိုက် သင့်ကလေးဟာအဆင့်တိုင်းမှာ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ကြီးထွားနေပြီး တခါတလေ နှေးသွားတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ကလေးဟာ လုံလောက်တဲ့ခွန်အားရတယ်ဆိုရင် ရွှင်လန်းကျန်းမာနေပြီး ကောင်းကောင်းကြီးပြင်းလာမှာပါ။ ကလေးရဲ့ကိုယ်အလေးချိန်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး စိုးရိမ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်ကိုဆက်သွယ်အကြံတောင်းခံနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရင်သွေးအတွက် သင့်တော်မယ့် အာဟာမျိုးကိုလမ်းညွှန်အကြံပေးနိုင်မှာပါ။
ဒုတိယပတ်ကိုဖြတ်သန်းလာခဲ့ပြီဆိုရင်တော့ ဂုဏ်ယူပါတယ်။ မပူပါနဲ့၊ ဘယ်လိုတွေကြုံနေရ၊ ကြုံနေရ သင်ဟာတစ်ယောက်ထဲမဟုတ်ပါဘူး။
နောက် ၃ပတ်မြောက်မှာလည်း သင့်ကိုကူညီပေးဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ရှိနေမှာပါ။
Murkoff, Heidi. What to Expect, The First Year. New York: Workman Publishing Company,
2009. Print version. Page 99-133.
အမျိုးသားများ ဆီးလမ်းကြောင်း ပိုးဝင်ခြင်း
မိန်းမကိုယ်ပိုးဝင်တာနဲ့ ရောဂါဖြစ်တာတွေကို ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ